Te hahafantatra bebe kokoa momba ny wiki? & Ndash; Mangataha Semalt Expert
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny wiki? - Mangataha Semalt Expert
Wikipedia na Wikipedia fotsiny dia iray amin'ireo tranonkala lehibe sy malaza indrindra eran-tany. Tsy toy ireo vohikala hafa, dia tsy misy orinasa lehibe amin'ny orinasa marobe, fa ny fanangonam-bokatra tsy misy mpitarika izay niasa teo ambanin'ny pseudonyms. Tsy dia zara raha manandrana zavatra vaovao izy ary manantena ny hahita mpitsidika maro be isan'andro. Raha ny marina, ity tranonkala ity dia nanova ny fiafaran'ny aterineto ary manana pejy maherin'ny folo tapitrisa amin'ny dikan-teny anglisy amin'ny tranonkala.
Oliver King, ny Semalt Mpanampy Customer Success, dia manampy fa rehefa misy zava-mitranga manerana izao tontolo izao, toy ny Boston Marathon, Wiki dia mamoaka izany ao anatin'ny ora maro. Satria tsy misy loharanom-baovao tahaka ny Wikipedia, dia miankina amin'izany ny serivisy sy tranonkala samihafa amin'ny aterineto mba hanangonam-baovao. Raha mitady zavatra ao amin'ny Google na Bing ianao ary manontany ireo tranonkala toa Siri, dia azonao atao ny maka sary fotsiny, fa Wikipedia dia manome anao ny antsipiriany feno momba ny zava-miseho eto amin'izao tontolo izao.
Na izany aza, ireo mpirotsaka an-tsitrapo namorona ity tetikasa ity dia mila miaro azy amin'ny fisaratsarahana, fanodikodinana, ary fandrobana..Hatramin'ny 2007, Wikipedia dia tratry ny tantara an-tsokosoko, ary ireo mpandray anjara isan-karazany dia tsy afaka manamboatra ireo hadisoana izay mitazona ity tranonkala ity ho lasa rakitsary tsara indrindra sy ambony indrindra eran'izao tontolo izao. Ny olana goavana indrindra ao amin'ny Wikipedia dia ny fidirana amin'ny tranonkala Pokemon sy vohikala. Manana ny pejiny ihany koa amin'ireo blaogy vehivavy sy tranonkala izay tsy ara-dalàna amin'ny vidiny rehetra. Heverina fa mihoatra ny sivy ambinifolo ny olona miasa ao amin'ilay tranonkala no miompana amin'ny orinasa mampiahiahy ary manakiana ireo mpikirakira mety ho liana amin'ny zavatra Wikipedia.
Nanomboka fanombohana famonjena ny Fikambanana Wikipedia ary tsy afaka mandidy ireo mpilatsaka an-tsitrapo hanova ny fomba fiasan'izy ireo. Na inona na inona ireo olana rehetra ireo, ireo mpampiasa dia mbola mino fa Wikipedia no loharanom-baovao tsara indrindra ary ny tranonkala dia manan-danja amin'ireo tonian-dahatsoratra sy mpianatra izay te-hikaroka zavatra mifandraika amin'ny tetikasany na andraikitra. Ny Encyclopaedia Britannica dia miakatra hatramin'ny 70 dolara isan-taona noho ny fidirana an-tserasera amin'ny lahatsoratra maherin'ny 120,000 ary manolotra adiresy maimaim-poana maro miaraka amin'ny dokam-barotra maro sy ny sora-baventy. Amin'ny lafiny iray, ny Wiki dia tsy manelingelina ireo mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny dokambarotra an-dabozia sy ny pop-ups. Rehefa navoaka ny tranonkala tamin'ny taona 2001, tsy nieritreritra ny ho loharanom-baovao lehibe ao amin'ny aterineto izy. Wales, mpandraharaha ara-bola ary mpandraharaha niara-niasa tamin'i Larry Sanger, filozofia Ph.D., tao amin'ny tranonkala ary nampiakatra an'i Nupedia, izay rakipahalalana maimaim-poana amin'ny aterineto. Wales dia miankina amin'ny fanomezana avy amin'ny zokiny zandriny raha nanohana an'i Nupedia ary nanisy lohahevitra maromaro tao anatiny. Nupedia dia manolotra fanangonana goavana, saingy lahatsoratra telo ambin'ny folo momba ireo lohahevitra toy ny Virgil sy ny traditions Donegal dia ho an'ny mpampiasa. Mifanohitra amin'izany kosa, i Wales sy Sanger dia manantena fa Wikipedia no hany loharanom-baovao ahafahan'ny mpampiasa finday ahitàna fampahalalam-baovao, ary hitondra mora kokoa ireo lahatsoratra vaovao izay ho tia manam-pahaizana sy manam-pahaizana momba ny fikarohana Source .